Maalinta: Noofambar 4, 2017
Sarkaalka Sarkaalka ah ee TCDD ee daabacaadda daabacaadda! Codsiyada la bilaabay!
TCDD waxay ku dhawaaqday inay shaqaalaysiinayso saraakiil sida ku xusan bayaankeeda. Wararkayaga, waxaad ku gaari kartaa shuruudaha iyo macluumaadka dalabka. Sida ku xusan ogeysiiska ay sameeyeen Madaxweynayaasha Shaqaalaha Dawlad-goboleedka 03 ee taariikhdu ahayd November 2017, TCDD [More ...]
AŞTİ iyo ANKARAY X-Ray Tababarka Shaqaalaha Amniga
Khubaro Agaasinka Amniga Guud, AŞTİ iyo shaqaalaha amniga ANKARAY, qalabka raajada iyo seminar-yada amniga. Tallaabooyinka Amniga iyo Amniga ee GS ee magaalada iley iyadoo lala kaashanayo shirkadda Ankara ee Magaaladda Metropolitan degmada BUGSAS [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, Xawaaraha Xawaaraha Sare (YHT) ayaa joojisay adeegga tareenka sababa la xidhiidha saamaynta xun ee ay muwaadiniintu ku sameeyeen khadadka Istanbul Tuzla-Kartal ee 200 waxay helayaan dan weyn. Xitaa kadib furitaanka wadada tareenka [More ...]
Transport, arrimaha badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan ee arrinta November ee Macalester Raillif "Turkey noqday ee Ganacsiga Route intooda badan oo Muhiim ah" waxaa la daabacay maqaal cinwaankiisu yahay. XARUNTA QARANKA EE ARSLAN Wasiirka meeqaam juqraafi ahaan dalkeenna, suuqyada caalamka [More ...]
“TRANSIST 10, Golaha Gaadiidka Istanbul iyo Fair en, ayaa abaabulay sannadkan 2017. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Konya, 6 November 2017 ayaa shaacisay inay dib u habeyn ku sameysay jadwalka baska iyadoo la siinayo duulimaadyo dheeri ah oo qadka leh cufnaanta rakaabka tan iyo Isniinta. Qorsheynta Gaadiidka Dawlada Hoose ee Konya iyo Nidaamka Tareenka [More ...]
Ubax ayaa soo dhaweynaya IZBAN's 500 millionth traveler
30 to İzmir August İZ Hello X ee 2010, İZBAN wuxuu gaadhay rakaabka 7 milyan oo rakaab ah sanadlaha. Safarka calaamad u ah İZBAN ee '500 millionth' waa Karşıyaka Gülser Gölcü [More ...]
Marka hore waa IZBAN: Laba Decker Train
IZBAN tareenka laba jibaarta ah ee 'IZBAN', tusaale ahaan Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka waaweyn ee Japan, oo ah mid u gaar ah waddankeena, tareennada laba-decker ah Izmir wuxuu riixay batoonka inuu soo bandhigo. 9 oo leh 'dejiye laba jibbaaran' 75 [More ...]
Kahramanmaraş Logistics Center waa mid wanaagsan
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınXarunta loo yaqaan 'Ra Kahramanmaraş logistics Center Be Good' 'waxaa lagu daabacay mareegta Nofembar ee majaladda Raillife. Waa tan maqaalka TCDD GUENAL MANAGER APAYDIN ​​Waxaan fulinay mashruuc kale… [More ...]
Maanta taariikhda: 4 November 1955 Eskişehir cusub ayaa loo adeegsadaa
Maanta oo ah Taariikhda 4 Noofambar 1910 Ruushka iyo Jarmalka waxay go’aansadeen inayan u tartamin midba midka kale Post Post oo ku saabsan mudnaanta tareenka ee ay ku guuleysteen Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Labada dowladood ayaa sidoo kale Tehraan ku ogolaaday inay ku xiraan Wadada Tareenka ee Baqdaad. [More ...]